Onkoloolessa 18, 2021
Faayilii - Koliin Paawel waajira Ministirii Dhimma Alaa Yunaaytid Isteets kessatti ibsa yeroo kennan, Fulbaana 17, 2001
Ministrii dhimma alaa Yunaayitid istees gurraacha jalqabaa kan ta’an hoogganaan waraana duraanii Jeneraal Kooliin Paawel umurii isaanii waggaa 84tti dhibee COVID-19n wal qabateen wixata har’aa du’aan boqotan.
Maatiin isaanii Feesbookii irratti maxxansuun du’a isaanii ennaa beeksisan, abbaa manaa gaarii fi nama jaalalaa, abbaa, akaakayyuu fi lammii Ameerikaa guddaa dhabne jedhan.
Maatiin isaanii akka jedhanitti Koliin Paawel talaallii vaayiresii koronaa guutummaan fudhataniiru. Hojjettoota mana yaalaa Walter Reed, ennaa guyyaa dhuma isaanii kunuunsa gaarii godhaniif ni galateeffanna jedhan.
Pawel bara 2001 hanga 2005 ennaa bulchiinsa ripaablikaanticha George W. Bush diplomaatii gameessa biyyattii turean. Kana dura Pawel jeneraala ol aanaa waraanaa fi gadamoojjii waggaa 35, hoogganaa Pentaagon, dura taa’aa hojjettootaa ta’uu dhaan bara 1983 hanga 1989tti ennaa bulchiinsa prezidaant George H.W.Bush tajaajilaniiru.